Ụbọchị My Pet » Gịnị mere ogologo Girls Mkpapụ Shorter Okorobịa
Ònye si n'ebe ọ bụla e dere na a girl toro ogologo karịa ha ma ọ bụ a Ihọd mkpumkpu karịa ha? Olee otú ọ na-aga? Ọ bụ na ọ ihere ma ọ bụ nanị ala? Nke a na nke e boggling mkpakọrịta nwoke na nwaanyị idaha maka mgbe now, dị ka ụfọdụ kweere na ndị mmadụ kwesịrị bụghị ụbọchị ụmụ agbọghọ toro ogologo karịa ha ma ọ bụ ụmụ okorobịa mkpumkpu karịa ha. Ọ bụ nnukwu oge a Ozizi e demystified na eziokwu!
Ọ Dị Mma, otú eleghị anya ọ pụrụ eche a bit ihere hulata susuo a Ihọd onye bụ mkpumkpu ebe ọ bụ na kweere na ụmụ okorobịa ga-abụ ogologo? Ma, ebee ka na-achị na-abịa site? Ọ pụtara na obere ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọ ogologo ekwesịghị mkpapụ nanị n'ihi na nke iwu na mkpakọrịta nwoke na nwaanyị idaha?
Gịnị ma ọ bụrụ na ogologo girl mmasị ndị obere Ihọd na Anglịkan? Ọ ga nile obụpde ruo amasị dị ka e nwere ndị na-ahọrọ toro ogologo ụmụ agbọghọ na mkpumkpu ụmụ okorobịa, kwere na ya ma ọ bụ! Na ndị dị otú ahụ ga-aga na ha mkpakọrịta nwoke na nwaanyị, a gbanyeghi ihe ndị ọzọ kwuru.
Dị ka ogologo oge dị ka a Ihọd na otu nwa agbọghọ na-ala na onye ọ bụla ọzọ si dị elu, mgbe ahụ onye ọ bụla ọzọ nwere ikike na-agbalị ịmanye ha echiche ha. Ọ dị mkpa ka a tiori demystified dị ka ụfọdụ ka ga-arụ ụka na ọ mfe karịa ime eme, na-agbakwụnye na ụmụ okorobịa na-wired mgbe niile na ịdị ogologo kari ụmụ agbọghọ, na ga mgbe nile ihere ma ọ bụrụ na ha bụ mkpumkpu.
Ọ bụ kwuru na ụmụ okorobịa ga-abụchaghị ikwu okwu banyere ya, ma ụfọdụ ihe ha na-eme ga-ekpughe otú iru ala na ha bụ ndị na ogologo girl. E nweghị ihe ọ bụla mara mma banyere a Ihọd onye bụ obi erughị ala banyere onwe ha.
Onwe-obi ike mgbe niile na-arụ nnukwu ọrụ dị otú ahụ ikpe. Ebe ọ bụ na ha nwere ka ụbọchị, mgbe ahụ obere ụmụ okorobịa na-enwe obi ike na ha onwe ha akpụkpọ kwụsịnụ echegbu onwe anyị banyere ha elu. Nke a nwere ike ọbụna akara ha a ụbọchị na ogologo girl onye ha fancied, ma ọ dịghị mgbe chere ga-aga na ha n'ihi na ha na elu.
Ehee, ogologo ụmụ agbọghọ na-ekwesịghị ọchị dị nnọọ ma dị ka ha nwere ihe ole na ole na-amụta onwe ha. Akpa a mkpumkpu Ihọd adịghị enye gị ikike enupụ ha elu erughi ala ha na akpịrị. Nye Ihọd a ezumike, ya ike zuru ezu na-enwe na-tiptoe ka na-enye gị nsusu!
Ogologo, ọchịchịrị, na nwoke mara mma adịghị ịbụ ihe ga-norm. Dị nnọọ ka elu anya mara mma, ọ ga-abụ ị na-ekpebi ihe ma ọ bụrụ na e nwere àgwà ndị ọzọ na-adọrọ adọrọ.
Unu na-akpa na-elu, ụbọchị onye! Ọ bụ nnọọ ekwe omume ịhụ a Ihọd onye bụ ogologo, ma na a ma ọ bụ ọbụna àgwà nke a agwa. Otu na-aga n'ihi na ụmụ agbọghọ. The elu kwesịrị ịbụ naanị a obere na-akpata, bụghị a na-ekpebi na-akpata. Ọ bụrụ na otu na-eme mkpapụ a onye na elu ha chọrọ, ọma ma na-ezi. Ọ bụrụ na ọ bụghị, ọ bụ ka ọma ma na-ezi.
N'ihi na ndị na-etinye dị elu dị ka ihe mbụ mgbe achọ ụbọchị, mgbe ahụ ha ga-eche banyere onwe ha mbụ dị ka ha nwere ike ịbụ ndị na a nsogbu. Elu ike na-achịkwa, ma àgwà nwere ike. Ma eleghị anya, nke a bụ nanị ụzọ a tiori nke toro ogologo ụmụ agbọghọ na mkpumkpu ụmụ okorobịa demystified.